Olee otu osisi si adi ndu n'ime ozara: usoro na mmeghari | Netwọk Mgbasa Ozi
Olee otú osisi na-adị ndụ n'ọzara
Ọzara bụ mpaghara ụwa nke àgwà ihu igwe ya dị oke egwu. Onwere onodu ojoo na ndu ibuli na onodu di nma. Yabụ, ọtụtụ osisi na anụmanụ ga-ewepụta mmegharị ọhụụ iji dịrị ndụ na gburugburu ebe a. Taa, anyị ga-ekwu maka ya otú osisi na-adị ndụ n'ọzara. Enwere mgbanwe dị iche iche nke kwere ka osisi dịrị ndụ n’ọzara ndị a buru ibu.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị otu osisi si adị ndụ n'ọzara na mgbanwe ndị ha kwesịrị ime.
2 Olee otú osisi na-adị ndụ n'ọzara
2.1 Nnukwu nchekwa mmiri
2.2 Nchedo ọkụ
2.3 Olee otú osisi na-adị ndụ n'ọzara: mmeputakwa
2.4 Oké ndidi
Na ihu igwe ọzara, usoro ikpochapu ikuku na-achi. Ọ bụ nkwụsị nke mmiri nke a na-ede n'elu n'elu n'ihi ikuku nke ikuku na-akpata site na radieshon nke anyanwụ na ụba okpomọkụ. A gbakwunyere obere igba ajirija nke dị site na mmiri nke osisi. Ihe puru iche nke evapotranspiration na eme ka oke mmiri ozuzo di na a dị ala dị ala n'afọ niile. Kpụrụ na-adịgide na 250 mm kwa afọ. Ọ bụ data dị ụkọ, nke na-egosi enweghị ahịhịa na iru mmiri na gburugburu ebe obibi. Otu n'ime ebe kachasị amara amara na mbara ala dịka ọmụmaatụ nke ọnọdụ ihu igwe ọzara bụ Sahara.
A na-ahụkarị ihu igwe ọwụwa dị n'akụkụ ebe okpomọkụ. Ulo ebe a na achota otutu ohia di gburugburu 15 na 35 degrees. Na ụdị ihu igwe evaporations dị ukwuu karịa precipitations. Ọnụego nke evaporation nwere uru dị elu karịa nke ọdịda. Nke a bụ ihe na - eme ka ala ghara ikwe ka gestation nke ndụ osisi.
Na mpaghara nke Middle East ha nwere nkezi nke 20 centimeters nke mmiri ozuzo kwa afọ. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ nke evaporation karịrị 200 centimeters. Nke a pụtara na ọnụego evaporation dị ihe ruru ugboro 10 karịa ọnụọgụ ọdịda. N'ihi nke a, iru mmiri dị oke ala.
Ozugbo anyi matara udiri ihu igwe nke ala ozara bu, anyi ga-ahuta usoro ihe ndi eji emegharia ihe ndi ozo gha eme iji zoo ndu ha. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Nnukwu nchekwa mmiri
Osisi ndi n’amuta uzo esi ebi ndu n’ime ozara nwere ike ichekwa mmiri nke oma. Anyị maara na osisi na-efufu mmiri site na usoro izere ikuku. Usoro a bụ ngagharị nke mmiri site na ihe ọkụkụ n'ime ikuku. Osisi nwere nke ka elu bụ ndị ọsụsọ na-agba ọsọsọ ma na-efunahụ nnukwu mmiri. Ha kwesiri inwe mmiri dịka ha nwere ike iji dịrị ndụ. Ọtụtụ osisi kpọrọ nkụ nwere ahịhịa pere mpe ma ọ bụ ogwu nke na-ebelata elu ala ha iji belata mbibi mmiri site na usoro mkpochapụ mmiri.
Ogwu ndị ahụ na-ebelata ọghọm nke mmiri kamakwa ọ na-enyere ụmụ anụmanụ aka igbochi osisi ahụ. E nwere ọtụtụ anụmanụ naanị ya Ha n eatri ihe-ọkukú n'ọzara inye miri. Otu otu osisi nwere usoro nchekwa nchekwa mmiri a bụ Sclerolaena.
Usoro ọzọ iji mụta otú osisi si adị ndụ n'ọzara bụ nchebe megide okpomọkụ. Anyị maara na ọzara nwere oke okpomọkụ dị elu n'ehihie ma dị ala n'abalị. Osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ike banye okpomọkụ. Nke a pụtara na n'ọzara ha niile abụghị ihe na-adọrọ mmasị. N’ime ọzara, ịmịkọrọ okpomọkụ bụ ihe ikpeazụ osisi na-achọ. Ya mere, ihe ọzọ nke mmegharị nke osisi ndị a bụ inwe epupụta nwere isi awọ, acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ngwakọta nke isi awọ, acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ngwakọta a na agba na-enyere aka belata ọkụ ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, oke ohia ma ọ bụ isi awọ nwere ike ibelata ọkụ nke akwụkwọ ya n'ihi ekele nchara nchara ya.
Olee otú osisi na-adị ndụ n'ọzara: mmeputakwa
Ntughari bu ihe ozo anyi gha echebara echiche mgbe oke oku di otutu. Ndị mmadụ na-agbakarị ikpo ọkụ site n'ịnọ n'ime ụlọ. Nke a na-emekwa ọtụtụ ụdị osisi kwa afọ. Ma enwere ọtụtụ osisi kwa afọ nke mezue ndụ ha dị mkpirikpi n'oge udu mmiri. Okirikiri ya ga-eto, mịa mkpụrụ ma nwụọ. Mkpụrụ ahụ na-anọgide na-ehi ụra ma nwee ike ịlanarị na gburugburu ebe akọrọ.
Mgbe ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị n'èzí dị mma, mkpụrụ na-agwụ na osisi nwere ike iji ọnọdụ iru mmiri ndị ahụ dị mma. Nọmalị n'oge a mgbe ha nwere ọtụtụ iru mmiri bụ mgbe n'ọzara ị nwere ike ịhụ osisi ndị ọzọ.
Uzo ozo di iche iche nke osisi na eme n’ime ozara bu nnagide ka ekpom oku. N’oge ọnwa ọkọchị ma ọ bụ ịkọ n ’ogologo ọkọchị, ahịhịa ndị na-anagide ụkọ mmiri na-adị ka ọ nwụrụ anwụ. Ha bụ osisi ndị na-ebelata ọrụ ha na opekempe. Ihe kachasị dị mma bụ na ha dị ka osisi dị mfe dịka enweghị akwụkwọ na enweghị akwụkwọ nke nwụrụ anwụ. Otú ọ dị, ha nọ n'ọnọdụ ụra mgbe ha na-eche mmiri ozuzo.
N'ikpeazụ, ọzọ n'ime mmegharị iji mara otú osisi si adị ndụ n'ọzara bụ ọnụego nke photosynthesis. Photosynthesis bụ ihe ọzọ karịa mgbanwe nke carbon dioxide, mmiri, na ume sitere na anyanwụ ka ọ ghọọ sugar na oxygen. Osisi na-amịkọrọ carbon dioxide site na stomata. N'oge na-ekpo ọkụ, stomata na-aza ma mmiri na-ekpochapụ anyị. Nke a na - enyere aka belata mmebi mmiri. Kama nke ahụ, na oyi na-atụ climates na stomata bụ mgbe niile na-emeghe. C4zọ CXNUMX bụ ihe na-enyere osisi ọzara aka ịmịkọrọ carbon dioxide na-enweghị mmiri mmiri. Ọ bụ usoro dị iche iche n'ime sel gị nke na - enye gị ohere idozi carbon dioxide na oke mmiri na oke okpomọkụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu esi eto osisi na mbara ọzara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Olee otú osisi na-adị ndụ n'ọzara
Osimiri Hydrographic nke Spain